Igumbi lePremium eAndini Wisma Palopo
Wara, Sulawesi Selatan, Indonesia
Ifumaneka ePalopo, esinye sezixeko ezizimeleyo (oomasipala) eMzantsi Sulawesi, eyaziwa ngeentaba zayo ezintle, iilwandle kunye neengxangxasi. U-Andini Wisma Palopo ufanelekile kuzo zombini indalo kunye nabakhenkethi bezolonwabo. Le hotele inendawo yokutyela ebizwa ngokuba yiSushi Hana, ukhuseleko lweeyure ezingama-24. Ngaphezu koko, indawo echongiweyo yokutshayela kunye nendawo yokupaka yasimahla iyafumaneka ukulungiselela iindwendwe. Abasebenzi bepropathi banobubele kwaye basebenza ngokufanelekileyo ukwenza ukuba ukuhlala kule villa kuthandeke kwaye kube nomtsalane.
Akukho kunqongophala kwezinto onokuthi uzenze okanye ukutya oza kuzama ngaphakathi kwendawo yase-Andini Wisma Palopo. Kumgama omfutshane ukusuka kwipropathi kukho iindawo ezinomtsalane kunye neendawo zokutyela abahambi abanokonwabela.
USushi Hana (Endlwini)
Isiselo saseLunatha kunye nokutya (40 m)
I-Resto Agumi (130 m)
URista Henna (1.0 km)
Permandian Alam Bora (2.7 km)
Pantai Labombo (4.1 km)
Ishishini & neZibonelelo:
I-ATM Mandiri (170 m)
Alfamidi (400 m)
IMall Palopo (2.9 km)
U-Andini Wisma Palopo ukufutshane neendawo ezinkulu zezothutho. Kukuhambo lwemizuzu engama-26 ukuya e-Bandara Lagaligo Bua kwisikhululo seenqwelomoya saseBua kunye nemizuzu emi-3 ukuya kwi-Terminal Dangerako Palopo.